Botozaza Pierrot : Nilaza ho tsy mbola manam-pikasana ny hirotsaka ho filoham-pirenena
mardi, 13 décembre 2016 11:46
Asa avy hatrany no nanamarihan’ny ZAMI, na ny Zanak’Ambanivolo Mivoatra, ny fitsidihany an’i Betafo. Fikambanana miompana amin’ny fanohanana ireo tantsaha tarihin’ny praiminisitra lefitra tamin’ny tetezamita Botozaza Pierrot.
Misy ny fiarahamiasan’ity fikambanany ity amin’ny “Zanak’Anjanapara Miray” ka izany no anton’ny fitsidihina. Lohahevitra telo no hifotoran’ny fikambanana raha ny fanazavany dia ny fanomezana hasina ny zanak’Ambanivolo na ambanivohitra, ny fampiroboroboana ny toe-karena ary ny fanavaozana ny fomba fiasa hisian’ny fifanakalozan-kevitra eo amin’ny mpitondra sy ny tantsaha ka henoina ny feon’izy ireo.
Efa mandrakotra an’i Madagasikara moa ity Zanak’Ambanivolo Mivoatra ity ka nambarany fa tsy mbola manam-pikasana ny hirotsaka ho filoham-pirenena akory ny tenany fa mizara traikefa amin’ny lafiny fifanomezan-tanana fotsiny ihany no sady mampianatra ny olona mba tsy hiandry lava ny fitondram-panjakana amin’ny asa famokarana foana.
Ankoatra ny fanamboarana lakandrano mirefy 1km moa dia nanolotra zezika 1,5 taonina ho an’ny fikambanana Safidy hamelomana ny tenany no nanolotra vola 2 tapitrisa Ariary ho an’ny fikambanam-behivavy tao amin’ny Kaominina Ranomafana ary vonona hifanampy amin’ny fikambanana rehetra manohana ny tantsaha izy ireo.